नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हरेक नेपालीले पढ्न भुल्नै नहुने एउटा बिशेष लेख ! छबिलाल उर्फ प्रचन्डले कमसेकम ३ पटक पढ्न र मनन गर्नु पर्ने यो लेखका लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई नेपाल मदर सलाम गर्दछ ! यो उनको लेख होइन वास्तविक यथार्थ हो !
हरेक नेपालीले पढ्न भुल्नै नहुने एउटा बिशेष लेख ! छबिलाल उर्फ प्रचन्डले कमसेकम ३ पटक पढ्न र मनन गर्नु पर्ने यो लेखका लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई नेपाल मदर सलाम गर्दछ ! यो उनको लेख होइन वास्तविक यथार्थ हो !
प्रचण्ड समयको सन्देश बुझ्दैनन् भन्ने कुरा धेरैले प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामबाट उनी हौसेको देखेरै लख काटेका थिए । :
कुनै पनि नेता त्यति उँचो स्थानबाट यति तल झरेको एक दशकभित्रै देख्न पाउनु लरतरो अनुभव होइन, यस पुस्ताको । आउँदा दिनमा अझै वर्ग, क्षेत्र, लिंगको थेगोले उनलाई कहाँ पुर्‍याउने हो, त्यो हेर्न त बाँकी नै छ । - Source : ekantipur